Maalinta: Sebtember 27, 2019
IMM waxay taageertay ololaha "Aan Caruurtiisa Iskuulka u aado Baaskiilka". Si kor loogu qaado isticmaalka baaskiillada ee gaadiidka magaalada, ardayda dugsiga dhexe ee 200 waxay u tageen guryahooda baaskiil. Hawlaha Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa ee Yurub [More ...]
Hüseyin Keskin, Madaxa Agaasinka Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ), iyo rasmiga rasmiga ah ee diyaaradda 2019, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka bisha 8 ee ugu horreysa (@dhmihkeskin) [More ...]
Degmooyinka Magaalada Diyarbakir, Diyarbakir Intercity Terminal Terminal (DİŞTİ), oo muraayadda u ah magaalada, ayaa nadiifisay jidadka iyo jidadka biyo nadiif ah saacadaha subaxnimada iyagoo nadiifinaya aagga wasakhda, iyo aroorta, meelaha caanka ah ee muwaadiniinta, [More ...]
Dabka iyo Digniinta Shilka loogu tala galay rakaabka saaran baska ee Waaxda Denizli D dabka
shaqaalaha degmada Denizli Naarta, codsiga noqon doonaa tusaale lagu Turkey leh oo ku saabsan shil bas oo dabka khibrad dhawaan bilaabay markii ugu horeysay. Dab-damiyaasha Magaalada, Basaska rakaabka ayaa istaagay isbaarooyinka booliska [More ...]
Gawaarida dhigashada ee Mersin Bitecek
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay qaaday talaabada ugu horeysa ee dhibaatada baarkinka taas oo ah dhibaatooyinka mudnaanta koowaad leh ee magaalada. 6 Mersin wuxuu magac u yeeshay naftiisa mashaariicda iyo shaqooyinka uu u soo saaray Mersin muddo gaaban gudaheed. [More ...]
Sawirka lugta waxaa lagu sawiray Marka hore ilaa 485 Point ee Sakarya
Sanadka 'Mudnaanta Lugtaha' ayaa lagu dhawaaqay 2019 ee Sakarya iyo muuqaalka 'Pedestrian First' ayaa lagu sawiray barta 485. 334 lugeeyayaasha ayaa u diyaar garoobay in ay soo jiitaan dareenka ahmiyadaha dadka lugaynaya ee taraafikada, isgoysyada leh muuqaallo ku saabsan XXX dugsiga oo ka gudbaya inbadan [More ...]
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya ayaa ku dhawaaqday ku dhawaaqista ardayda u socota magaalada iyagoo ku guuleysta SAU iyo SUBU: “4, 5, 6, 12, 13, 15, 19K, 20, 21K, 22K [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, Muwaadiniinta Dilovası'nda waxay u fududayn doonaan nolosha 'Mashruuca Isku-xirka' Eynerc Junction - Mashruuca Isku xirka Yavuz Sultan Selim 'wuxuu sii wadaa inuu sii shaqeeyo. Wajaarka mashruucan, kaqeybgalka degmada Dilovası ee wadada D-100 iyo [More ...]
Helitaanka Bilaashka ah ee Kent Derby!
, Inc. , Waaxda Gaadiidka iyo Maareynta Gaadiidka ayaa isku xirey 29 Sebtember 2019 Axadda 16.00 Derince Stadium iyo Derince Stadium Derince Stadium waxay ku socon doonaan adeeg bas oo bilaash ah oo loogu talagalay magaalada Derby. [More ...]
Gawaarida Habeenimo ee IETT iyo Gawaarida Gawaarida
İETT waxay kordhisay tirada duullimaadyada iyo gawaarida ee 24 G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobus line, oo bixisa gaadiidka 34 saacad. Markaa, dadka deggan Istanbul waxay heli doonaan gaadiid ka raaxo badan. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul Ekrem [More ...]
Dawlada Hoose ee Rize waxay qaadaysaa ficil mashruuca Carahin Hill Cable Car project
Duqa magaalada Rize Rahmi Metin, Trabzon, degmada Besikduzu ee Ordu iyo Rize waxay casuumeen shirkadaha inay sameeyaan shirkadaha gawaarida fiilada leh waxayna sheegeen inay wadahadal la sameyn doonaan. Duqa magaalada Metin, ee gobolka Ordu iyo Besikduzu [More ...]